Home Wararka Deg Deg: MW Farmaajo iyo RW Kheyre oo galay Shir albaabada u...
Deg Deg: MW Farmaajo iyo RW Kheyre oo galay Shir albaabada u xiran yahay..
MW Maxamed Cabdullaahi Farmaajo aya ku wargeliyay habmaamuuskiisa in aanu cidna qaabili doonin maanta iyo caawa, waxaana MOL ay ogaatay in MW Farmaajo uu u yeeray RW Kheyre oo ay hadda ku wada jiraan shir albaabada u xiran yahay.
Shirkan aya imaanayo kaddib warqad ka soo baxday xafiiska Gud. Mursal taasoo guddoonka BJFS uga hor yimid kala diristii guddiga Maaliyadda taaso uu ku dhawaaqay Gud. KX Cabdiwali Muudeey xilli uu Gud. Mursal safar shaqo ugu maqnaa dalka dibaddiisa.
Xaaladda Siyaasadda dalka ay sii cakirmeysa, waxaana dib u dhac weyn uu ku yimid hannaankii geeddi socodka dowladda iyo haykalkii dowladnimo, iyadoo RW Kheyre iyo MW Farmaajo ay u dhaqmayaan hab dhaqanka kali talisnimo.
Sida ay sheegeen qubaro derista siyaasadda Soomaaliya, waxaa la isku raacay in aanay sii jiri karin wada shaqeyn dhexmari karta xukuumadda iyo Baarlabaanka, lama huraan ay noqon karto in xukuumadda la kala diro waa haddi la rabo in dib loo soo celiyao nidaam dowladeed iyo ilaalinta sharciga.
Previous articlePresidents of Djibouti, Sudan arrive in Ethiopia
Next articleDawladda FS oo Mar waliba Sameysa Xaalad Abuur lagu marin habaabiyo..
Cabdiweli Gaas “Waxaa la rabaa in dadka runta loo sheego” shirkii...
Puntland oo ka biyo diiday Shirkii uu Farmaajo ku baaqay